Inhliziyo I-China FK605 Desktop Round/Taper Bottle Positioning Ilebula ifektri nabahlinzeki |I-Fineco
Umshini Wokufaka ilebula we-FK605 Desktop Round/Taper Bottle ulungele ibhodlela le-taper neyindilinga, ibhakede, lokulebula.
Ukusebenza okulula, ukukhiqizwa okukhulu, Imishini ithatha indawo encane kakhulu, inganyakaziswa kalula futhi iphathwe nganoma yisiphi isikhathi.
Ukusebenza, Vele uchofoze imodi ezenzakalelayo esikrinini esithintwayo, bese ubeka imikhiqizo ku-conveyor ngamunye ngamunye, ukulebula kuzoqedwa.
Ingagxilwa ekulebuleni ilebula endaweni ethile yebhodlela, ingafinyelela ukumbozwa okugcwele kokulebula komkhiqizo, futhi ingazuza ukulebula koMkhiqizo ngaphambili nangemuva kanye nomsebenzi wokulebula wamalebula kabili.Kusetshenziswa kakhulu emaphaketheni, ekudleni, ekuphuzweni, kumakhemikhali wansuku zonke, emithini, kwezimonyo nakwezinye izimboni.
Ungasetha ubukhali bevidiyo ekhoneni elingezansi kwesokudla levidiyo
Ukucaciswa Kwelebula Isitika se-Adhesive, esobala noma e-opaque
Ukubekezelela Ilebula(mm) ±1
Amandla(pcs/min) 20 ~ 45
Usayizi womkhiqizo wesudi(mm) φ25～φ120;H:25~150;Kungenziwa ngokwezifiso
Usayizi welebula yesudi(mm) L:20 ~ 380;W(H):20 ~ 130
Usayizi Womshini(L*W*H)(mm) ≈1260*970*890
Usayizi Wephakethe(L*W*H)(mm) ≈1280*1000*920
Amandla kagesi 220V/50(60)HZ;Ingenziwa ngezifiso
Iroli yelebula(mm) I-ID: = 76;OD:≤260
Izidingo Zokukhiqiza Ilebula
1. Igebe phakathi kwelebula nelebula ngu-2-3mm;
2. Ibanga phakathi kwelebula nonqenqema lwephepha eliphansi ngu-2mm;
3. Iphepha eliphansi lelebula lenziwe nge-glassine, elinokuqina okuhle futhi livimbele ukuphuka (ukugwema ukusika iphepha eliphansi);
4. Ububanzi bangaphakathi bomgogodla bungama-76mm, kanti ububanzi bangaphandle bungaphansi kuka-280mm, buhlelwe ngomugqa owodwa.
Ukukhiqizwa kwelebula engenhla kudinga ukuhlanganiswa nomkhiqizo wakho.Ngezidingo ezithile, sicela ubheke imiphumela yokuxhumana nonjiniyela bethu!
Faka imikhiqizo emshinini wokuphakela → Imikhiqizo idluliswa ngebhande lokudlulisa → Inzwa yomkhiqizo ithola umkhiqizo→I-PLC ithola isignali yomkhiqizo bese ivumela ukulebula isenzo semoto→ isilinda silungise umkhiqizo nokulebula
I-1 ) Uhlelo Lokulawula: Uhlelo lokulawula lwe-Panasonic lwaseJapan, olunokuqina okuphezulu nezinga lokuhluleka eliphansi kakhulu.
2 ) Uhlelo Lokusebenza: Isikrini sokuthinta umbala, isikhombimsebenzisi esibonakalayo esiqondile ukusebenza okulula.IsiShayina nesiNgisi siyatholakala.Ukulungisa kalula wonke amapharamitha kagesi futhi ube nomsebenzi wokubala, okuwusizo ekuphathweni kokukhiqiza.
3) Uhlelo Lokuthola: Kusetshenziswa inzwa yelebula yesiJalimane ye-LEUZE/Italian Datalogic kanye nenzwa yomkhiqizo waseJapane we-Panasonic, ezwelayo kulebula nomkhiqizo, ngaleyo ndlela iqinisekisa ukunemba okuphezulu nokusebenza kokulebula okuzinzile.Isindisa kakhulu abasebenzi.
4) Umsebenzi we-alamu: Umshini uzonikeza i-alamu uma inkinga yenzeka, njengokuchitheka kwelebula, ilebula ephukile, noma okunye ukungasebenzi kahle.
5) Impahla Yomshini: Umshini kanye nezingxenye ezisele zisebenzisa insimbi engagqwali kanye ne-anodized senior aluminium alloy, enokumelana nokugqwala okuphezulu futhi ayikaze yagqwala.
6) Hlomisa nge-voltage transformer ukuze uvumelane nomthamo wendawo.
Okwedlule: I-FK-SX Cache printing-3 unhlokweni womshini wokulebula ikhadi
Olandelayo: I-FK606 Desktop High Speed ​​​​Round/Taper Bottle Labeller
Umshini wokulebula wendawo engashintshi yebhodlela
umshini wokulebula wokubeka ibhodlela
umshini wokulebula webhodlela le-desktop cone
umshini wokulebula webhodlela le-desktop glass taper
umshini wokulebula we-desktop plastic taper bottle
umshini wokulebula webhodlela oyindilinga wedeskithophu
umshini wokulebula webhodlela le-desktop taper
Umshini wokulebula wamabhodlela ayindilinga
I-FK603 Semi-Automatic Round Bottle Labeling Machine
I-FK803 I-Automatic Rotary Round Bottle Ifaka ilebula ku-Ma...
Umshini Wokufaka ilebula Webhodlela Eliyindilinga we-FK805 (...
I-FK606 Desktop High Speed ​​​​Round/Taper Bottle Lab...